Winii Mandeellaa : Qabsooftuun farra Appaartaayidii Afriikaa Kibbaa waggaa 81tti du'an - BBC News Afaan Oromoo
Winii Mandeellaa : Qabsooftuun farra Appaartaayidii Afriikaa Kibbaa waggaa 81tti du'an
Haaromsameera 3 Ebla 2018
Winii Mandeellaa bara 1996 abbaa manaasaanii hiikanis waliin waamamaa yoona ga'an
Qabsooftuun farra sirna Appaartaayidii Afriikaa Kibbaa Winii Mandeellaa waggaa 81ffaasaaniitii du'aan boqochuusaanii gargaaraan dhiyoosaanii beeksise.
Winii Madikizeelaa Mandeelaa haadha warraa Pirezidaantii gurraacha Afriikaa jalqabaa Neelsan Mandeellaa turan.
Suuraan kun wayita Neelsan Mandeellaan waggaa 27 booda mana hidhaatii gadi dhiifaman fudhatameedha.
Hidhaan Mandeellaa, mallattoo qabsoo farra Appaartaayidii, kan waggoota kurna sadiif tureedha.
Waggoota booda maqaa gaariin Winii Mandeellaa gama siyaasaatiinis gama seeraatiin gadi bu'eera.
Dubbi himaan maatii isaanii Viiktar Dilaamiinii dhibee yeroo dheeraaf irra ture booda boqochuu Winii Mandeellaa dubbatan.
Winii Mandeellaan jalqaba bara kanaarraa kaasanii hospitaala seenaa utuma bahanii,har'a sa'atii booda maatiisaanii gidduutti du'aan boqotaniiru.
Bara 1990 wayita Neelsan MAndeellaan mana hidhaatii gadi dhiifaman
Winii Mandeellaa bara 1936 Baha Keep iddoo yeroo sana Tiraansikeey jedhamuun beekamtutti dhalatan.
Neelsan Mandeellaa waliin bara 1950 walfuudhanii waggoota 38 waliin turaniiru. Garuu Neelsan Mandeellaan waggaa 27 mana hidhaatti waan dabarsaniif wayita sana garagar bahan.
Erga Mandeellaan hidhaa galanii qabsoo isaanii hrka fuuchuun gaggeessaa kan turan Winii Mandeellaa walabummaa lammiilee gurraachaaf baayyee akka qabsaa'antu himama.
Waggaa shan booda garuu warra adii ittiin lolaa turaniin qabamanii mana hidhaa galan.
Bara 1988, Winii Mandeellaa adda duree qabsoo farra Appaartaayidii ta'an
Ammas yakka kan biraa ajjeefamuu daa'ima waggaa 14 ka humna waraanaa keessa ture Istoompii Seyipii keessaa harka qabda jedhamuun hidhaan waggaa ja'aa itti murtaa'e. Garuu isheen adabbicha fudhachuu didnaan maallaqaan akka adabamtu taasisan. Bara 1990 keessa mana hidhaatii gadi lakkifamanii waggaa lama booda bultiin isaanii kan Mandeellaa wajjinii jeeqame.
Bara 1996 Neelsan Mandeellaarraa adda bahan, garuu maqaan isaanii walumaan waamamaa yoona ga'eera.
Faawundeeshiniin Nelsan Maandeellaa mana murtii Afriikaa Kibbaa keessaa mallattoo alabich irraa akka haquuf gaafate.
Qabsoo olaanaan booda Raamaafosaan bakka Jaakoob Zuumaa bu'uun akka paarticha oggannuuf filataman.
Ajjeechaa Haacaaluu hordofuun namoota 166 ol lubbuun darbe
'Ammayyuu du’a isaa amanaa hin jiru'-hiriyyaa Haacaaluu
Amansiisaa Ifaa ogeessi kaameeraa BBC sirba Haacaaluu Hundeessaa badhaasa mo'ate waraabe waa'ee du'a Hacaaluu guyyaa sanaa fi sana boodaa dubbateera
Dubartiin Afrikaa Kibbaa 'abbaa warraa seetee nama biraa awwaalte, guddaa gaddite'